4 Layli ka dhan ah muruqyada murqaha ee dhabarka | Tababbarka iyo fidinta
4 Layli ka dhan ah muruqyada murqaha ee dhabarka
07 / 06 / 2017 /0 Comments/i Murqaha iyo Skeleton, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Dhabarka dambe ee subaxnimadiisa? Miyay ku shaqaysaa muruqyada dambe?
Iskuday 4-ta jimicsi ee kaa caawin kara inaad dabciso murqaha murqaha oo aad adkeysid muruqyada dhabarkaaga. Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto saaxiib ama xubin qoyskaaga ka mid ah oo ay dhibayso muruqyada dhabarka oo ciriiri ah. Dadka badankiisu waxay ka faa'iideystaan ​​barashada xoogaa jimicsi ah oo loogu talagalay guntimaha muruqa ee dhabarka.
Halkan waxaa ah 4 layli oo adkayn kara muruqyada ciriiriga ah, kordhin kara wareegga dhiigga oo gacan ka geysan kara dhaqdhaqaaqa badan ee muruqyada iyo kala-goysyada. Muruqyada adag iyo murqaha murqaha ee dhabarka ayaa caan ah. Layligani waxay kaa caawin karaan inaad yareyso xiisadda muruqyada ee aad dhisto maalinta oo dhan.
Jimicsigu waa inuu ahaadaa mid ku habboon xaaladdaada caafimaad ee gaarka ah. Ku daweynta takhtar si rasmi ah loo oggol yahay ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto iyadoo lagu darayo tababbarka soo kabashada ugu fiican. Layligani 4 wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa kordhinta dhaqdhaqaaqa iyo furitaanka muruqyada murqaha. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto boggayaga Facebook hadaad hayso ra'yi ama faallooyin.
Tilmaamaha wanaagsan: Fiidiyowyada tababarka iyo Is-cabbirka
Hoos ugu rogo si aad u daawato laba fiidiyow oo tababar weyn ah kaas oo kaa caawin kara inaad dabciso murqaha dhabarka, hagaajinta wareegga dhiigga iyo yareynta xanuunka dhabarka. Qeybta hoose ee maqaalka, waxaad sidoo kale ka akhrisan kartaa waxyaabaha aan iskula talinay.
MUUQAAL: Shan Jimicsi Oo Ka Soo Horjeedo Xasaasiyadda dareemayaasha ee Dhabarka Sababta Murqaha Murqaha
Muruqyada ciriiriga iyo ciriiriga ee dhabarka ayaa sababi kara xanaaqa dareemaha. Haddii neerfayaashu xanaaqaan, tani waxay u horseedi kartaa murqaha inay noqdaan kuwo kacsan oo xanuun badan. Halkan waxaa ah shan jimicsi oo jimicsi oo kala duwan oo kaa caawin kara inaad dabacsato murqaha dhabarka iyo xanaaqa dareemayaasha.
MUUQAAL: shan jimicsi oo culus oo looga soo horjeedo xaaluf darrooyinka xun ee laf dhabarta (Spinal Stenosis)
Booska hoose ee lafdhabarta waxaa loo yaqaanaa stenosis laf-dhabarka. Xaaladahan neerfaha adag ayaa sababi kara xanaaqa dareemayaasha iyo ciriiriga dareemayaasha kuwaas oo sababi kara shucaac iyo kabuubyo lugaha iyo sidoo kale muruqyada dhabarka oo kacsan. Hoos guji si aad u aragto shan jimicsi oo is-weydaarsi weyn oo kaa caawin kara dhaqdhaqaaqa wanaagsan iyo murqaha oo yaraada.
Sidoo kale akhri: - Maxay Tahay Inaad Ka Ogaato Xanuunka Dhabarka
Marka lagu daro laylisyadaas, waxaan kugula talineynaa inaad hagaajiso dhaqdhaqaaqaaga maalinlaha ah, tusaale ahaan qaab shaqo yar oo aan caadi ahayn, culeys ku soo noqnoqda (laga yaabee inaad wax ka beddeli karto goobta shaqada?), Macaamiisha socodka ee meelaha adag ama dabaasha barkadda biyaha kulul. Haddii aad hore u soo heshay cillad la xaqiijiyey, waxaan kugula talineynaa inaad ka hubiso takhtarkaaga caafimaad (takhtarka, chiropractor, fisyoterapist ama wixii lamid ah) haddii jimicsiyadan adiga kugu habboon yihiin.
1. Abaabul dhinac fudud (Duub jilibka)
Layli abaabulaa dhabarka oo fidiya muruqyada u dhaw. Waa in lagu sameeyaa si taxaddar leh oo dhaqdhaqaaq leh oo xasillan.
Laga bilaabo Wacan: U jiifso dhabarkaaga - gaar ahaan sariir tababbar oo barkimad ah meesha ugu hooseysa. Gacmahaaga toos ugu qabo dhinaca oo ka sii saar labada lugood dhinacaaga. Isku day inaad dejiso jirkaaga sare sida aad jimicsiga u sameyneysid.
fulinta: U oggolow jilbahaaga inay si tartiib tartiib ah uga soo dhacaan dhinac ilaa dhinac adiga oo si dabiici ah u haya miskahaaga - hubso in labada garbaha ay ku hayaan halka ay ku xirnaanayaan dhulka. Layli jimicsi tartiib ah u qabo kuna hay booska illaa 5-10 ilbiriqsi kahor intaadan si tartiib ah dhinaca kale ugu dhaqaaqin.
2. Jiifinta kursiga iyo dhabarka hoose
Layligani wuxuu fidiyaa muruqyada gluteal iyo piriformis - kan dambe waa muruq inta badan ku lug leh sciatica iyo sciatica. U jiifso sagxadda dhulka adigoo dhabarkaaga hoos u jiifa, oo doorbidaya sariirta jimicsiga oo leh qoortaada hoosteeda. Ka dib u laabo lugta midig oo saar bowdada bidix. Ka dib qabso bowdada bidix ama lugta midig oo si tartiib ah dhankaaga u soo jiido illaa aad ka dareento inuu si qoto dheer ugu fidsan yahay dhabarka bowdada iyo murqaha muruqyada dhinaca aad kala bixinayso. Ku hay culeyska 30 ilbiriqsi. Kadib ku celi dhinaca kale. Lagu qabtay wax ka badan 2-3 nooc oo dhinac kasta ah.
4. Layli kala-bixin ah ee murqaha dambe ee roller
Duufaanta xumbadu waxay noqon kartaa qalab aad u fiican oo lagu kala furfuri karo xoogaa garbaha garbaha iyo dhabarka kore. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu kala bixiyo murqahaaga - sida layligan oo si fiican ugu fidaya muruqyada laabta / pectoralis.
Waa tan sida loo sameeyo layliga: U jiifso duubista xumbada si aad taageero ugu hesho qoorta iyo dhabarka labadaba. Fadlan la soco in tan kaliya ay ku shaqeyso rollers xumbada waaweyn oo dhererkeedu yahay 90 cm ama ka badan. Ka dib gacmahaaga si tartiib ah ugu kala bixi dhinaca una dhaqaaji xagga sare illaa aad ka dareento inay u fidsan tahay muruqyada laabta Ku hay booska 30 - 60 ilbiriqsi ka dibna naso. Ku celi 3-4 nooc.
Halkan waxaa ah 4 layli oo loogu talagalay xasaradda murqaha dhabarka. Murqaha murqaha iyo murqaha murugada waa caadi, laakiin dhib badan. Layligani waxay kaa caawin karaan inaad naaqusto murqaha isla markaana aad kordhiso dhaqdhaqaaqa. Tababarku waa inuu ku habboon yahay shakhsiga.
Maxaan iska qaban karaa nafsadeyda iyo murqaha dhabarka?
Tani waa su'aal aan maalin walba ku helno xarumaheena caafimaad. Marka ugu horreysa, waxaa muhiim ah in la tilmaamo in tallaabooyinka qaarkood ay u fiicnaan doonaan qaar ka mid ah kuwa kale. Sidaa darteed, waxaan door bidnay inaan diiradda saarno talobixin guud oo halkaan ah. Sababaha guud ee qallafsanaanta iyo xiisadda dhabarka waxaa u sabab ah culeys aad u tiro badan, wareegga oo aad u yar iyo cadaadis badan oo ka soo baxa dhabarka hoose. Haddii aan tan u qaadanno bilow, waxaan dooneynaa inaan bixinno talooyinka soo socda - iyo, sidaan soo sheegnay, kani waa talo aan maalin walba ku bixinno goob caafimaad.
Talada 1aad: Dhaqdhaqaaqa
Dhaqdhaqaaq badan oo nolol maalmeedka ah. Horey waad u maqashay - haddana waad maqashay markale. Kudar jeebbo leh dhaqdhaqaaq iyo dhaq-dhaqaaq badan oo nolol maalmeedkaaga ah. Haddii xanuunku kaa horjoogsado dhaqdhaqaaqyada iyo jimicsiga, la tasho dhakhtar idman si uu kaaga caawiyo.
Talooyin 2: Keebka Kubadaha dhibic
Ma ka beddeli karaan shaqada muruqa fiisiyoterabiga ama lafopractor -ka casriga ah, laakiin sidoo kale doqon ma aha. Adoo isticmaalaya tiro ka mid ah keebka kubadaha dhibic (fiiri tusaalaha halkan ikhtiyaarka wax iibsiga - wuxuu ku furmayaa daaqad cusub) maalin kasta oo kale - xusuusnow maalin nasasho inta u dhexeysa kalfadhiyada - waxaad kicin kartaa wareegga sii kordhaya ee meelaha leh unugyada jilicsan ee jilicsan iyo unugyada jilibka.
Talada 3aad: Jagada Fadhiga ee Kaladuwan oo leh Qalliinka 'Ergonomic Coccyx'
Shaqadaadu miyey ku lug leedahay fadhi badan oo PC-ga ah hortiisa (sida tiro aan caadi ahayn oo naga mid ah)? Adiguna si gaar ah uma danaynaysid inaad ku kharash gareyso 10-15 kun kursi xafiiska ergonomic ah oo aad qaali u ah? Kadib qofku wuu awoodaa barkinta lafdhabarta ergonomic (fiiri tusaalaha xiriirka halkan) noqo xal wanaagsan. Waxaan si farxad leh kugula talineynaa inaad bedesho booskaaga fadhiga maalintii oo dhan markaad barkinta isticmaaleyso. Dahab dahab ah sababtoo ah waxay isbedeshaa meesha dhabarka aad ka hesho culeyska markaad fariisato. Badal badal si aad u kordhiso kala duwanaanshaha dhabarka. Fikrad isku mid ah ayaa loo isticmaali karaa adiga oo ku dhibaya xaqiiqda ah inaadan helin boos hurdo oo wanaagsan, laakiin markaa tan barkin miskaha oo si gaar ah loo habeeyay (fiiri tusaale ahaan xiriirka halkan).
Ma Dooneysaa La-tashi ama Su'aalo Ma Leedahay?
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto YouTube eller Facebook haddii aad qabtid su'aalo ama wax la mid ah oo ku saabsan jimicsiga ama murqahaaga iyo dhibaatooyinka kalagoysyada. Waxa kale oo aad arki kartaa muuqaalka guud ee rugaha caafimaadkeena adoo adeegsanaya xiriirka halkan haddii aad rabto inaad ballansato latalin. Qaar ka mid ah waaxyadeenna loogu talagalay Rugta Xanuunka waxaa ka mid ah Xarunta Caafimaadka ee loo yaqaan 'Eidsvoll Healthy Chiropractor Center iyo jimicsiga jirka (Viken) iyo Lambertseter Chiropractor Center iyo Jimicsiga Jirka (Oslo). Anaga, karti-xirfadeedka iyo bukaanku had iyo jeer waa kuwa ugu muhiimsan.
(Eeg dulmar guud halkan kana hel waax kuu dhow)
PAGE xiga: Maxay Tahay Inaad Ka Ogaato Burburka Qoorta
Sidoo kale aqri: - AU! Miyaa xanuun soo daahay mise dhaawac soo daahay? (Ma ogeyd in labada ay leeyihiin labo daaweyn oo aad u kala duwan?)
sawirada: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos iyo tabaruca akhristaha ee la gudbiyey.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/ryggstrekking.jpg?media=1648573622 468 625 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-06-07 21:34:152021-09-12 15:03:274 Layli ka dhan ah muruqyada murqaha ee dhabarka
Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) 5 Layli ka dhan ah toogashada sixirka